Ungasasaza njani ngokuBukhoma kwi-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 413
Iqonga le-YouTube liyaqhubeka nokwenza izinto ezintsha kwaye kwesi sihlandlo ibandakanya ukubanakho kokwenza usasazo ngqo ngqo kwisicelo nangasimahla. Ukuba ungathanda ukwazi okungakumbi malunga nesi sihloko kunye nendlela ongaqala ngayo ukwenza iividiyo ezibukhoma, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo.
Iividiyo ezibukhoma zinokuba yenye indlela ebalaseleyo kwabo bajonge ukwandisa ababhalisile. Awuyi kufuna izixhobo ezingaphezulu zokusasaza bukhoma kwi-YouTube, ekuphela kwento iya kuba kukudala iakhawunti kweli qonga kwaye unonxibelelwano olufanelekileyo lwe-intanethi.
Yintoni iYouTube Live
Eli ligama lomsebenzi omtsha ofakwa yiYouTube kwiqonga lawo. Ngale ndlela, abasebenzisi banokwenza usasazo ngqo ngokulula nangokulula. Into ebaluleke kakhulu ekufuneka uyazi kukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza ividiyo ebukhoma kwiYouTube:
Inguqulelo elula: Olona khetho lukhuthazwayo kakhulu kwabo baqala kweli lizwe losasazo ngqo. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ukwenza ividiyo ebukhoma, iYouTube ifuna ukuba ubuncinci babhalisele kwi-1000 kwisitishi sakho.
Inguqulelo yesiqhelo: Olukhetho olufanelekileyo kubaqeqeshi kuba ifuna amava ngakumbi ngenxa yokusebenzisa iikhowudi.
Izibonelelo zokusebenzisa iYouTube Live
Ngaba awunakulinga ukwenza ugqithiso ngeYouTube Live? Nazi ezinye zezibonelelo eziphambili onokuzifumana ngokwenza ividiyo ebukhoma kweli qonga:
I-YouTube ngoku lelinye lawona maqonga aziwa kakhulu kwihlabathi liphela, nto leyo eyenza ukuba ibe yenye indlela yosasazo ngqo olufikelela kwizigidi zabasebenzisi.
Uncedo lwe-YouTube kukuba iqonga layo lilula ukuphatha. Awudingi ukuba yingcali ukuze uqonde ukuba isebenza njani. Ngamanyathelo nje ambalwa ungenza usasazo lwakho lokuqala ngqo.
Kwi-YouTube uza kuba nenketho fumana umxholo ohlukeneyo, yoqobo neyinyani. Kweli qonga kukho ithuba lazo zonke izinto ozithandayo, ke unokwenza usasazo ngqo ngesihloko osithandayo.
Amanyathelo okusasaza ngqo kwi-YouTube
Ngaba ucinga ukuba ukwenza usasazo ngqo kwakunzima kakhulu? Inyaniso kukuba sesinye sezixhobo ezilula nezona ziluncedo esizifumana ku-YouTube ngoku. Nawuphi na umsebenzisi weqonga unokukhetha ukwenza iividiyo ezibukhoma. Kuya kufuneka ulandele amanyathelo ambalwa alula:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kusasazo ngqo kuleqonga iya kuba Iakhawunti ye-YouTube. Ukuba awubhaliswanga, awuyi kuba nakho ukusasaza ngqo.
Uya kudinga ukuba wenze ngokwezifiso iprofayili yakho yeakhawunti. Cofa kumfanekiso weprofayile, emva koko ucofe ku "itshaneli yakho"Kwaye" ulungiselele isitishi sakho ":
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Studio Studio"
Cofa kwi icon yokurekhoda apho ithi "Yakha"Kwaye ukhethe ukhetho" lokusasaza ngokuBukhoma ".
Iqonga liza kukubonisa uthotho lweedatha ekufuneka uzifakile kwaye uzilungiselele ukuze usasaze ngqo.
Ukusasaza ngoku kulungele ukuqala. Oku kunokuhlala ixesha elide ufuna, unokhetho lokwabelana ngekhonkco lokuhambisa kunye nabasebenzisi bamanye amaqonga edijithali. Ngale ndlela uya kuba nabaphulaphuli abaninzi abaxhume kwividiyo yakho ebukhoma.
1 Yintoni iYouTube Live
2 Izibonelelo zokusebenzisa iYouTube Live
3 Amanyathelo okusasaza ngqo kwi-YouTube
Uyifaka njani imifanekiso kwiakhawunti yam ye-Instagram ngokuthe ngqo kwiPC?